“Waxaa ay Dawladdu aad uga xuntahay in dad badan oo rayid ah oo aan waxba galabsan ay ku dhintaan dagaaladda kismaayo kasoo cusboonaaday oo ah kuwo marar badan ay ka digtay Dawladda isla markaana aan loo baahnayn xiligan muhiimka ah, taariikhiga ah ee dalku uu kasoo kabanayo burburkii iyo dagaaladii gaaray 22-kii sano. Ilaahay ha u naxariisto intii ku dhimatay dagaaladdan, kuwii ku dhaawacmayna allaha...
Gudoomiyaha Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa maanta xafiiska ku qaabilay Gudoomiyeyaasha Baarlamaannada Puntland iyo Galmudug oo maalinnimadii shalay aheyd soo gaaray magaalada Muqdisho. Read More →
Fowsiya Yuusuf Xaaji Aadan “Waa Jiraan Dowlado Dan ka leh Soomaaliya laakiin Norway wax Dan ah oo ay ka leedahay Soomaaliya Ma jirto” Waxaa maanta oo Taariikhdu tahay 27-da Juune 2013 Magaalada Muqdisho Heshiis ku kala Saxiixdey Dowladaha Soomaaliya iyo Norway kaasoo lagu Tilmaamey Heshiis Dhinacayo Badan taabanaya , waxaana heshiiskaas Dowladaha Soomaaliya iyo u kala Saxiixey Wasiirada Arrimaha...
Khudbadda Gudoomiyaha Baarlamaanka Ee 26ka June (Qoraal+Cod)
Baarlamaanka Federaalka Soomaaliyeed wuxuu ku talinaya, in is-dhexgalka iyo isusocodka bulshada, wada xiriirka dhaqaale, ku dhaqanka iyo xormaynta Diinta Islaamka iyo maamusidda xeer-dhaqameedka soomaalida, ilaalinta midnimada dhulka iyo gobannimada umadda soomaaliyeed, wadar ahaantooda waa dhaqammo isku dhafan iskuna dhidibbo aasan, oo xiriiriya bulshada soomaaliyeed oo ay dheer tahay hal luqad ay...
Wasiiradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya ma waxaysan hayn Boggii labaad ee Qoraalkii ay saxiixday March 31, 2013
Fowsiya oo markale arrintii Saxiixa Badda ku eedaysay Websiteyada Soomaaliyeed, ayadoo aan waxba ka dhehin saxiixii ay soo bandhigtay Jariidadda Standard Jariidadda ka soo baxda Nairobi ee Daily Nation ayaa caddaadkeedii June 18, 2013 qoraal ay cinwaan uga dhigtay “The warring parties” waxay ku qeexday in Go’aankii Golaha Wasiirada Soomaaliya ka soo saareen Badda uu ka dhigan yahay...
“Waxaa la caddeeyey inay qaraxan ku dhinteen 8 qofood oo afar ay ahaayeen Soomaali. Anigoo ku hadlaya magaca shacabka iyo kan dowladda Soomaaliyeed waxey tacsi u dirayaa eheladdii iyo saaxiibadii ay ka geeriyoodeen, isla markaana EEBBE uga baryey in inta dhaawaca ah uu EEBBE u fududeeyo dhaawacooda. “Waxaan la hadlay Ban Ki Moon, Xoghayaha Guud ee QM iyo Nick Kay, Ergeyga Gaarka ah ee...
Wafdi ka socda Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay bur burkii kadib ka qeybgalay ACP-EU oo ka furmay magaalada Brussels ee xarunta Midowga Yurub. Wafdiga ka socda Baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa hogaaminaya Gudoomiye ku xigeenka Koobaad ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Mudane Jeeylaani Nuur Iikar waxaana wafdigan ay shirka horgeeynayaan hormarradii ugu dambeeyey ee...
Raiisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta [June 18, 2013) magaalada Muqdisho ka furay shir Qaran oo looga arrinsanayo dib-u-habaynta waxbarashada Soomaaliya. Waxaana soo qabanqaabiyey Wasaaradda Horumarinta iyo Adeegga Bulshada, Hay’adaha UNESCO iyo UNICEF. Hoos ka akhri khudbaddii Ra’iisul wasaaraha DFS iyo warbixin: Read More →
Shirweynihi Beesha Karanle oo Sannadlaha ahaa ayaa waxaa Sanadkan Martigelyey Jaaliyadda Beesha ee Magaalada Bristol,shirkaas oo ay ka soo qeybgaleen Dhamaan Ergooyinka Gobolada Wadanka Uk, Shirkaas Ajendayaasha looga hadlayey ay ka mid ahaayeen Dib u eegidda waxyaabihii u qabsoomay beesha Snadki la soo dhaafay. Warbixnno laga Dhageystay Gudigi hore iyo Gudoomiyahooda. Doorashada Gudoomiyaha Sanadka...